China Carbide shinda rwakapetwa mhete fekitari uye vagadziri | Dongxing
Cemented carbide rwakapetwa mhete rudzi rwechishandiso zvinhu zvine hurefu hwakaoma uye yakanaka kupfeka kuramba. Kuomarara uye kupfeka kuramba kunobva kune tungsten carbide, nepo kuomarara uye simba zvichitsamira pakubatana kwesimbi. Kugadzira rin'i yakaoma ringi rinonyatso kutamba zvayakanakira zvepamusoro kusakara kusagadzikana, hupenyu hwakareba uye hunyanzvi hwekuita mukumhanyisa waya waya kutenderera, vanokurumidza-kumhanya waya tambo vagadziri vanofanirwa kutarisisa uye kubata navo nokungwarira pavanotenga nekushandisa yakaoma alloy roller zvindori.
1. Tichifunga nezve musika wakakura waMorgan 5-chizvarwa tekinoroji kutenderera chigayo, kambani yedu yakashongedzwa nemupumburu mhete yakapedza chigadzirwa imba yekuchengetera zvinoenderana uye mamodheru, ane anopfuura makumi matatu zvidimbu zveisina chinhu zvakachengeterwa yega yega kutaurwa, iyo inogona kupindura kune kukurumidza kutenga kwevatengi, uye zvikamu zvekukurumidzira zvine kudikanwa kudiki zvinogona kupihwa mukati memazuva gumi nemashanu. Panguva imwecheteyo, kune anopfuura mashanu marudzi eshanduro roll zvindori zve8-inch uye 6-inch, ayo anogona kusangana neyakajairwa rolling zvinodiwa zveako-epamusoro waya waya workshop kune iyo yakanyanya kureba.
2.Give kutamba kwakazara kune kwedu sekambani zvakanakira muhuwandu hwevatengesi, mhando uye ruzivo rweanotenderera mhete mune yekunze rolling mill yekugadzira mutsara (Morgan 6 chizvarwa mutsara, Danieli kaviri module unit) uye epamba Morgan 5 chizvarwa chinotenderera chigayo, tinogona kuona iyo kugadziridzwa uye kugoverwa kwemaringi zvigadzirwa zvemhando imwechete uye zvinhu, uye simbisa kudiwa kwekugadzirwa kweako akakurumidza waya waya yemusangano munguva pfupi.
3.Kuchishandisa iko kwepamhepo kushandiswa kwemaketuru emakambani edu, isu tichaitisa mhando yekutevera kuti tiwedzere kuvandudza chigadzirwa mhando. Isu tichapa chairo uye chinotarisirwa kupindura kumatambudziko ehunhu hweanotenderera mhete mukati maawa gumi nemaviri. Kana zvichidikanwa, vashandi vehunyanzvi vanogona kusvika panzvimbo iyi mukati maawa 24-48 kuti vabatsire mukugadzirisa matambudziko akakodzera.
4.Simbisa technical exchange uye mushandira pamwe mune cemented carbide munda nekambani yako.
5.Free kudzidziswa kwevanoshanda ve roller mhete slotting grinder inogona kupihwa.
Dzakananga zano: kuronga vachikuya muchina vanoshanda yeiyo-yekumhanyisa waya waya tsvimbo musangano wekambani yako kudzidzisa mune yedu yekugadzira musangano, uye kusangana neanodiwa mashandiro e slotting michina munguva pfupi. Kana zvichidikanwa, isu tinokwanisa kushandisa edu ekumisikidza michina kune mashoma mashoma e emergency emergency roll zvindori zvekambani yako mahara.
Pashure: Roller mhete
Zvadaro: Roller mhete-DSC_0029
Yakasimbiswa Carbide Roll, Machine Chikamu, Mill Kutenderera Rings, Tungsten Carbide Roller Mhete, Tungsten Carbide Roller, Tungsten Carbide Kutenderera,